सञ्जयको सिर्जना : कुदाउने होइन त फोहोरबाटै गाडी ! - Idea Studio Nepal
जबजब पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार अनि काठमाडौंका सडक नै ढाक्नेगरी छरपस्ट फ्याँकिएका फोहोर देख्ने गर्छन्, तबतब सञ्जय निकै बेचैन हुन्छन् । उनी विश्वजगतमा हुने गरेका नयाँनयाँ ‘इन्भेन्सन’ पनि नियालिरहेका हुन्छन्- फोहोरबाट ग्यास बनाउन सकिन्छ, त्यो ग्यासबाट खाना पकाउने, मेसिन चलाउनेदेखि गाडीसम्म कुदाउन सकिन्छ ।
‘हामी हरेक कुरामा छिमेकी देशहरूसँग परनिर्भर छौँ, अझ नुनदेखि सुनसम्मै,’ उनी भन्छन् ‘गाडी त झनै सबै विदेशबाट मगाउने हो । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी स्रोत साधनको प्रयोग गरेरै सवारी चलाउन सकियो भने त हरेक वर्ष बाहिरिने खबौँ रकम बच्ने भयो । यसले अन्य विकासका कामहरू गर्न सकिन्छ नि ! अनि परनिर्भर हुनुपर्ने समस्याको पनि हल हुन्छ ।’
अहिले सञ्जय र गौरव अध्ययनमा लागिरहेका छन् । जसका लागि यी दुई जनालाई ७ लाख रूपैयाँको लगानी आवश्यक छ । ‘लगानी तपाईंको, आइडिया हाम्रो ? अनि भएन त बिजनेस, देशलाई पनि हुने, हामीलाई पनि हुने,’ उनी भन्छन् ।
सञ्जय आइडिया स्टुडियो सिजन– ४ का ‘मेड इन नेपाल’ राउण्डका प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीसँगै अन्य २ जनाले आफ्ना आइडिया प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने बाँकी ३ जनाले आउने मंगलबार प्रस्तुत गर्नेछन् ।
आइडिया स्टुडियोले नेपालभरका ४ सय जनाबाट ३१ जना छनोट गरेर ४ वटा विधामा उनीहरूका तमाम आइडियालाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसरी हरेक विधाबाट एक प्रतिस्पर्धी विजेता बनेकालाई व्यावसायिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ । अहिले आइडिया स्टडियोमा २४ जना नवप्रतिभालाई व्यवसायगत तालिम तथा प्रशिक्षण दिइँदै आएको छ ।